Khabiirka Kala Duwan: Sidee looga horjoogsanayaa Spam Referral in Ruinsada Macluumaadka gudbinta Analytics
Mararka qaarkood, boggaaga ayaa laga yaabaa in lagu helo gudbin baabuurta. Xaaladahan, baabuurtani waxay sababi kartaa waxyeelo badan oo ka imanaysa xogtaada falanqaynta. Webmaster kasta wuxuu u baahan yahay xog sax ah oo sax ah oo loogu talagalay ujeedooyinka suuq-geynta e-ganacsiga. Spambots iyo ilaha kale ee bixinta spam gudbinta waxaa ku jiri kara macluumaad badan oo ku saabsan xogta spam. Xaaladdan, dadka isticmaala waxay heli karaan macluumaad aan sax ahayn oo ku saabsan horumarka ganacsiga e-ganacsiga. Si aad uga qaaddo baabuurta been-abuurka ah ee macluumaadkaaga, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad barato sida loo xakameynayo spam gudbinta macluumaadkaaga Analytics - american machinery equpment appraiser.
Qodobkan, Jack Miller, oo ah xubin shaqaale xirfad leh Semt Digital Services, wuxuu bixiyaa xeelado dhowr ah oo kaa caawin kara inaad soo celiso gaadiidka saxda ah:
Go'aaminta taraaficda been abuurka ah
Xaaladaha intooda badan, baabuurta fake waxay ka timaadaa meelo isku dayaya inay qariyaan magaca martida. Gaadiidka been-abuurka ah waxaa laga yaabaa inuu ka yimaado been abuur boggaga soo degaya . Hay'adaha Blackhat SEO ee ku ballanqaadaya natiijada degdegga ah ee raqiis ah in ay haystaan ​​badankooda ilaha taraafikada. Kaftanka khatarta ah ee botnet ayaa ku lug leh marti-gelin badan oo ku soo booqda bogga bogga bogga. Xaaladaha intooda badan, macluumaadkani wuxuu farageliyaa habka ay dad badani ula macaamilaan boggan. Isticmaalka adeeg bixiyayaasha emayl la'aanta ah waxay kordhiyaan khatarta ah inay helaan gaadiidka noocan ah
Qofka internetka ah ee xariifka ah wuxuu awoodi karaa inuu helo aqoonsiga hantida Google Analytics..Isticmaalka Aqoonsigaaga Aqoonsiga, wuxuu kordhin karaa ama hoos u dhigi karaa jaangooyooyinka illaa inta ay og yihiin qodobada Google Analytics ay ku habeeyaan. Nooc kasta oo Google Analytics ah ayaa ku xiran booqashooyinka boggan. Xaaladaha kale, bixiyeyaasha emailka qaar ayaa u muuqda inay ogaanayaan emayl ka imanaya domiga. Waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo bixiye emayl ilaalin ah inta badan aagga.
Sida loo xakameeyo spam gudbinta
Waxaad ka hortagi kartaa xayeysiinta spam ayadoo la adeegsanayo faylka .htaccess ee asalka domainka. Isticmaalayaasha isticmaala server Apache ayaa leh ikhtiyaarka ah in ay isticmaalaan dhowr lambar oo ku yaal boggooda internetka. Waa lagama maarmaan in la daryeelo marka nidaamyadani ku jiraan boggaaga. Qaar ka mid ah qoodhadhyadani waxay leeyihiin karti ay ka soo jiidan karaan dhamaanba goobta adeega. Waxaa intaa dheer, waxay keeni karaan khatarta kordhaysa ee spam gudbinta.
Waxa kale oo aad isticmaali kartaa google Spam filterers. Badankooda websaydhku waxay leeyihiin kumbuyuutarka Google Analytics si ay uga caawiyaan hawlaha falanqaynta boggooda. In tabka admin, waxaad joojin kartaa taraafikada ka imanaysa domain gaar ah ee aad dooratay. Waxaad awoodi kartaa inaad ku darto shaandhaadyada gaarka ah ee doorashadaada. Filtarrooyinkani waxay xakameyn karaan darajooyinka taraafikada ee ka imanaya goobaha ay yihiin spam. Waxaad sidoo kale shidan kartaa taraafikada adreeska IP. Isticmaalka kukiyada iyo waxyaabo kale ayaa kor u qaadi kara ammaanka boggaaga.
Spam u gudbinta wuxuu noqon karaa hawl culus oo wajahaya hawlo badan oo e-commerce ah. Tusaale ahaan, dadka ku shaqeeya shabakadda e-commerce waxay la kulmi karaan waxyaabo badan oo spam iyo sidoo kale ganacsiyo kala duwan. Barashada in la joojiyo gaadiidka gudbinta way adkaan kartaa. Tilmaamahan wuxuu kaa caawin karaa talooyin ku saabsan sida looga hortago spam u gudbinta ee faragelinta macluumaadka boggaaga. Intaas waxaa sii dheer, waxaad ku xaddidan kartaa bots in aad sameyso booqashooyinka webka been abuurka ah ee domain.